”प्रकृतिकी ध’नी पाँचपोखरी” – Life Nepali
”प्रकृतिकी ध’नी पाँचपोखरी”
जगत देउजा १६ मंसिर २०७६, सोमबार , सय पर्यटन गन्तव्यको सोह्रौंं सूचीमा परेपछि सिन्धुपाल्चोकस्थित पाँचपोखरीको च’र्चा ब’ढ्दो छ। पाँचपोखरी थाङपाल गाँउपालिका–३, भो’ताङको ४ हजार १ सय मिटर उचाइमा रहेकोे यो पोखरी संसारकै उच्च स्थानमा रहेका नौवटा प्रमुख हिमतालमध्ये एक हो। यो इन्द्रावती नदीको उ’द्गमस्थल पनि हो। यहाँबाट गणेश, दोर्जे लाक्पा, जुगल, याङरी र गौरी शंकर हिमाल र मनोरम पहाडी सुन्दरता अवलोकन गर्न सकिन्छ। नागरिक दैनिकमा जगत देउजाले लेखेका छन् ।
सञ्चारमाध्यम, गीत, कविता आदिमा पाँचपोखरीको चर्चा ब’ढ्दै गए पनि प्राकृतिक स्रोतको धनी भएर पनि आर्थिक हिसाबले पछि परेको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको जनजीवन, आर्थिक अवस्था, खेतीपाती, संस्कृती आदि विषयमा लेख्न धेरै बाँकी छ। सिन्धु पाल्चोकको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा अ’वस्थित यो गाउँपालिका केही वर्ष पहिलेसम्म भौगोलिक हिसाबले दु’र्गम र वि’कट मा’निन्थ्यो। अहिले सबै वडामा मोटर बाटो बनेका छन्। नदी किनाराको मूल सडकभन्दा डाँडातिरका बाटा क’च्ची भए पनि राम्रा छन्। सबै घरमा बिजुली पुगिसेको छ।
पालिकाको कूल क्षेत्रफल १८७.२९ वर्ग किमि छ। २०७५ सालमा गाउँपालिकाले गरेको स’र्वेक्षणअनुसार कूल घ’रधुरी सं’ख्या ७ हजार ८ सय ३ छ। महिला १६ हजार ९ सय ६४ र पुरुष १७ हजार ७ सय ३३ गरी कूल ज’नसंख्या ३४ हजार ६ सय ९७ छ। ६० प्रतिशत तामाङ स’मुदायको बसोबास छ। वन, उर्वर कृषि जमिन, नदीनाला, बहुमूल्य जडीबुटी र जै’विक वि’विधता, दर्जनौं पर्यटकीय स्थल, धार्मिक म’हत्व बोकेका प्र’सिद्ध स्थान, यस गाँउपालिकाको दि’गो विकासका आधार हुन सक्छन्। साना–ठूला गरी यहाँ धेरै नदी तथा खोला छन्।
मेलम्चीपछि दोस्रो चरणमा काठमाडौंमा पानी ल्याउने भनिएका या’ङ्री र ला’र्के दुवै खोला यही गाउँपालिकामा पर्छन्। गाँउपालिकाको कूल क्षेत्रफलमध्ये ५४.४७ प्रतिशत भूभाग वन तथा चरन क्षेत्रले ढा’केको छ। १२.६२ प्रतिशत भूभाग खेतीयोग्य छ। यसरी हेर्दा खे’तीयोग्य जमिन अति कम छ भने वनजंगलले ढा’केको क्षेत्र अ’त्यधिक देखिन्छ। ९९ प्रतिशत परिवारसँग आफ्नै जमिन छ। बाँकी १ प्रतिशत गु’ठी र मो’हीका रूपमा अरूका जग्गा कमाउँछन्। भू’मिहिनता लगभग शून्य छ। अधिकतर परिवारको पेसा कृषि भए पनि ४३.३७ प्रतिशत घरपरिवारका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा छन्।
मंसिरको पहिलो साता पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा सञ्चालित जी’विकोपार्जन कार्यक्रमबाट सिक्ने अभिप्रायले गाउँपालिकाका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीसँगै त्यस क्षेत्रमा जाने मौ’का मिलेको थियो। गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकालाई अ’र्गानिक बनाउने योजना बनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा कृषिको कुरा गर्नासाथ खेतीपातीमा रा’सायनिक म’ल प्रयोग गरे÷नगरेको, बीउ स्थानीय वा हा’इब्रिड के हो, वि’षादी प्रयोग भए÷नभएकामा ब’ढी चासो राख्छन्। कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास गर्नमा उनको विशेष चा’ख छ।
यसो हुँदा युवा ज’नशक्ति गाउँमै अ’टाउन सक्ने उनको विश्लेषण छ। यहाँको कृषि जमिन कम भए पनि जमिन उ’ब्जाउशील छ। केही ठाउँबाहेक सबैतिर पानीका स्रोत प्रशस्त छन्। वनक्षेत्र ठूलो भएकाले पशुपालनबाट म’नग्गे आम्दानी गर्न सकिने स’म्भावना छ ।केही युवाले यस्तो उद्यम सुरु गरिसकेका पनि छन्।उदाहरणका लागि वडा नं. ८,लागर्चे कोटगाउँका दीपेन्द्र र दीपक धितालले दुईजना मिलेर व्यवस्थित खोर बनाई बाख्रापालन गरेका छन्।कोटगाउँ सम्मटोलका प्रत्येक परिवारले तरकारी खेती गरेका छन्।सु’धारिए को गोठले सुविधा बढेको स्थानीयको भनाइ छ।
वस्तुभाउ पाल्ने किसानलाई भ’कारो सो’होर्ने काम सजिलो छैन। तर ८–१० हजार रुपैयाँ लगानीमा सु’धारिएको गोठ बनाउँदा यो काम गर्न सजिलो भयो। पि’साब जम्मा गर्न सकिने भएकाले त्यो तरकारी बालीमा प्रयोग गर्न सकियो। साबेलले सजिलै सो’होर्न सकिने ,हात ल’गाउनुनपर्ने अनि पानी भएको ठाउँमा तुरुन्त प’खाल्न सकिने भएकाले पनि गोबर सो’होर्ने काम धेरै सजिलो भएको किसानले बताए। कोदो कु’ट्ने काम हप्तौं लाग्थ्यो। अहिले मे’सिनले एकै दिनमा सकिन्छ। तराईतिर हाटबजार ज’नजीवनसँग अभिन्न रूपमा जो’डिएको छ।
तर सिन्धुपाल्चोकका लागि हा’टबजार अलि नौलो हो। वडा नं. ३, भो’ताङमा २ वर्षदेखि हरेक शनिबार हा’टबजार लाग्ने गरेको छ। हा’टबजारका लागि व्यवस्थित ट’हरा बनाइएको रहेछ। बिक्रीका लागि ल्याइएका चिज यति स्व’स्थ देखिन्थे कि काँ’चै खाउँ जस्ता। सिस्नु, जिम्बु, सु’काएका वनच्याउ, रूखमा फल्ने गोलभेंडालगायत जहाँ पायो त्यहीं नपाइने दर्जनौं वस्तु त्यहाँ थिए। उत्पादन भएर खा’इनसकेका वस्तु बिक्रीबाट राम्रै आम्दानी हुन थालेको हा’टबजारका बिक्रेताले बताए। चिसो ठाउँ भएकाले हुन सक्छ– जिरो इ’नर्जीको शीत भण्डारले राम्रो न’तिजा दिइरहेको छ।
क’म लागतमा स्थानीय सामाग्री उ’पयोग गरेर बनाइने यस्ता र’स्टिक स्टो’रमा पहिलो वर्ष कमैले आलु भ’ण्डारण गरे। त्यसबाट लगाएको बीउले उ’त्पादन राम्रो दिएपछि दोस्रो वर्ष शीत भण्डारमा आलु भ’ण्डारण गर्ने धेरै भए। सानो भएकाले सबैलाई पुगेन। आलु प्र’शस्त उत्पादन हुने भो’ताङमा वडा का’र्यालयले अन्य टो’लमा पनि यस्तो घर निर्माण गर्ने यो’जना बनाएको छ। यस्तो भ’ण्डारमा बी’उका लागि मात्र नभएर खाने र बिक्री गर्ने दुवै खालका आलु राख्न सकियो बिग्रिन पाउँदैन। बाँ’सखर्कका अ’गुवा किसान रे’क्पा तामाङ केही वर्ष पहिले साह्रै चि’न्तित थिए।
बाली लगायो कि बाँदरले केही बाँकी नराख्ने स’मस्याले दि’क्क भएर खेती गर्न छा’डे। जमिन बाँ’झो रहन थाल्यो। धेरैपछि उनले चिया लगाउन पाए हुथ्यो कि भन्ने सो’चेर छलफल थाले। अहिले उनी र स’मुदायका ३७ परिवार मिलेर रोपेका ७० हजार बिरुवाले उत्पादन दिन सुरु गरेका छन्। पहिलो च’रणमा २ सय रोपनीमा खेती भइरहेको छ। यसलाई वि’स्तार गर्ने योजनामा उनीहरूले यस वर्षबाट न’र्सरी स्था’पना गरेका छन्। व्य’वस्थित योजना बनाएर कृषि र प’शुपालनलाई वि’स्तार गर्ने ठू’लो अवसर छ। भएका जमिनमा खाद्यान्नका साथै अन्य नगदे बाली– तरकारी, फलपूmल, तोरी, मसला तथा जडीबुटी र प’शुजन्य उ’त्पादन वृ’द्धि गर्न सकिने प्र’शस्त स’म्भावना छन् ।
प’रम्परागत कुलो म’र्मत सुधार गरी १२ महिनै उत्पादन गर्न सकिने अ’वसर छ। ठूलो क्षेत्रमा वन फै’लिएको हुँदा पशुपालनबाट दूध र मासु उ’त्पादन गर्न सकिने देखिन्छ। यातायात से’वालाई कृषकको पहुँच र उत्पादनसँग जो’ड्ने र’णनीति लिइनुपर्छ। गाउँमै रोजगारी सिर्’जना गरेर अहिलेको सहरी क्षेत्र र विदेश प’लायन क’म गर्न सकिन्छ। पर्यटन, कृषि तथा पशु उद्योगको प्र’चुर स’म्भावना रहेको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको भ’विष्य उ’ज्ज्वल देखिन्छ।
Previous बाँदरले है’रान बनाएपछि किसानले लगाए ग’ज्जबको आइडिया
Next एकल पुरुषका दुःख ,त्यो सम्झेर रातभर निद्रा लाग्न दिँदैन !
भाडा तिर्न नसकेपछि घरबेटीहरूले शा’रीरिक स’म्बन्ध बनाउन द’बाब दिन थाले”
से¥क्स पा’वर’ ब’ढाउने च’क्क’रमा यी ८ का’र्य क’दापी न’गर्नुस्”
नेपालमा सक्रिय पुरुष वे:श्यालयः यसरि सम्पर्कमा आउछन श्री’मान बिदेशमा भएकाका श्रीमती र ए’कल महिलाहरु
‘यत्तिका वर्षसम्म लिपुलेक नचाहिने अ’हिले किन चा’हियो ?’: जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण
श्री’मान गु’माएको आलो घा’उ न’सुक्दै,ज’वान छोरा गोविन्दको श’व फे’ला प’रेपछी, आमाको बि’लौना
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ४२ पुग्यो”
नेपालमा आज एकैदिन थ’पिए १५६ जना सं’क्रमित, जम्मा सं’क्रमितको स’ङ्ख्या १०४२ पुग्यो